Ithegi: isihluzi sogaxekile | Martech Zone
Ithegi: isihluzo sogaxekile
Amagama eMixholo ye-imeyile abangela izihluzi ze-Spam kwaye akuhambise kwisiqulathi seefayili eziyinkunkuma
Ukufumana ii-imeyile zakho zisiwe kwisiqulathi seefayili eziyinkunkuma… ngakumbi xa usebenze nzima ukwakha uluhlu lwababhalisi abangene ngokupheleleyo kwaye unqwenela ukujonga i-imeyile yakho. Kukho izinto ezimbalwa ezichaphazela isidima sakho somthumeli ezinokuchaphazela amandla akho okwenza kwi-inbox: Ukuthumela kwi-domain okanye idilesi ye-IP enegama elibi lezikhalazo ze-spam. Ukufumana ingxelo njenge-SPAM ngababhalisi bakho. Ukufumana
Imigaqo yaseMelika egubungela imiyalezo ye-imeyile yorhwebo yalawulwa ngo-2003 phantsi komthetho we-Federal Trade Commission we-CAN-SPAM. Ngelixesha elingaphaya kweminyaka elishumi… ndisavula ibhokisi yam engenayo yonke imihla kwi-imeyile engacelwanga enolwazi olungeyonyani kwaye ingekho indlela yokuphuma. Andiqinisekanga ukuba isebenze njani na imimiselo kunye nesoyikiso sokuya kuthi ga kwi-16,000 yeedola ngolwaphulo-mthetho ngalunye. Into enomdla kukuba, umthetho we-CAN-SPAM awufuni mvume yokuthumela i-imeyile
NgoLwesibini, Julayi 8, 2014 Douglas Karr
Sijonge iipesenti zethu zebhokisi ye-imeyile kunye namaqabane ethu kwi-250ok kwaye sifumana iziphumo ezilungileyo. Ndifuna ukumba nzulu kancinci kulwakhiwo lwe-imeyile kwaye ndafumana isixhobo esikhulu esibizwa ngokuba ngumvavanyi weposi. Umvavanyi weposi ukubonelela ngedilesi ye-imeyile eyahlukileyo onokuyithumela kuyo incwadana yeendaba kwaye emva koko bakunike uhlalutyo olukhawulezayo lwe-imeyile yakho ngokuchasene nokuhlolwa kwe-SPAM okuqhelekileyo ngezihluzi ze-junk. Inkqubo ye-
Baninzi abathengisi be-imeyile abangena kwisigqi apho bathumela khona i-imeyile ngokusekwe kwishedyuli yabo okanye kwiinjongo zabo endaweni yeemfuno zababhalisi. Ukubonelela ngeemeyile kubaphulaphuli bakho kunye nokuqinisekisa ukuba baxabisekile kuya kubagcina bebhalisile, bezibandakanya, beguqula… kwaye ekugqibeleni bayakugcina kwifolda ye-imeyile engabalulekanga. Emva kokundwendwela iwebhusayithi yakho, uthenga, okanye ukhubeke kwibhlog yenkampani yakho, umthengi ubhalisile ukufumana i-imeyile kuwe. Kuba